Nalaza Tamin’ny Fihazakazahana i Samia Yusuf Omar, Fa Maty Tamin’ny Naha Mpitsoaponenana Azy Kosa. Manome Voninahitra Azy ny Sarimiaina Vaovao. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2016 18:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Español, Nederlands, Italiano, Français, English
“Nofinofy Olaimpika, boky an-tsary vaovao mikasika an'i Samia Yusuf Omar, navoaka voalohany tamin'ny teny Anglisy ny Aprily 2016. Sary: Nomen'i SelfMadeHero maimaimpoana
Nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org ho anisan'ny tetikasa “Amin'ny Alàlan'ny fiainan'ireo vehivavy”, ny 19 Jolay 2016, ity lahatsoratr'i Daniel Gross ity. Naverina navoaka eto ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Fantatr'i Teresa Krug tamin'ny alalan'ny lahatsary YouTube mampalahelo ilay vaovao ratsy: Samia Yusuf Omar, Somaliana mpihazakazaka izay nandray anjara tamin'ny Lalao Olaimpika ny taona 2008 tany Beijing, nilentika raha saika hiampita ny ranomasina Mediteraneana. Nalaza tamin'ny naha-mpihazakazaka haingam-pandeha azy i Omar. Talanjona ireo atleta sy mpanao gazety tamin'ny fotoana nahafatesany toy ny mpitsoaponenana.
“Ao foana ilay tsy finoana hoe mety ho tonga amin'ny toeran'ny mpitsoaponenana ihany koa ny atleta Olaimpika,” hoy i Krug, mpanao gazety tsy miankina izay lasa naman'i Omar tany Somalia. “Raha tsy afaka nanao izany io olona io, karazana fanantenàna toy ny inona no hisy ho an'ireo olona hafa?”
Natao taminà boky an-tsary, “An Olympic Dream,” (Nofinofy Olaimpika), nataon'ilay Alemàna mpanaingo sary, Reinhard Kleist, ny fiainan'i Omar. Efatra taona taorian'ny nahafatesan'i Omar, mahalaza zavatra maro noho ny hatrizay ny tantarany. Mbola mitohy ny olan'ny mpitsoaponenana, ary manakaiky haingana dia haingana ny Lalao Olaimpikan'ny lohataona. Amin'ity taona ity, hisy mihitsy aza ny ekipan'ireo altela mpitsoaponenana.
Raha miompana amin'ny fiainana nahavariana an'i Omar, fa tsy ny fahafatesany fotsiny, asehon'ny “An Olympic Dream” ny maha-olona eo amin'ny olana iray izay matetika loatra no manjavozavo . Manao ilay tranga ho toy ny karazana fanaovan-gazety amin'ny endriny vaovao miompana bebe kokoa amin'ny olona, fa tsy amin'ireo resaka politika fotsiny, ny filazalazàn'i kleist feno hafanàna sy fihetsehampo ny mombamomba an'i Omar, izay manamafy ny fanambaràn'i Krug.
Andinindininy, “An Olympic Dream.” Sary: nomen'ny SelfMadeHero maimaimpoana
Tamin'ny fanombohan'ny “An Olympic Dream,” ny taona 2008, teo am-pitadiavana vata fahitalavitra ny fianakavian'i Samia Yusuf Oma. Nirenireny nanerana an'i Mogadishu , renivohitra Somaliana izy ireo nandrapahitàny iray. Teo amin'ilay vata manjelanjelatra, mijery an'i Omar milahatra eo amin'ny tsipika fiaingàna tao amin'ny kianjan'i Beijing izy ireo. Hita ho mahia izy. Rehefa nipoaka ny basin'ny fanombohana, taraiky tany aoriana i Omar. Nahazo ny fon'ireo vahoaka maro izy, tsy hoe nety tsara izy tamin'ny fifaninanana, fa kosa hita ao aminy sy nasehony ny fikirizana.
Rehefa niverina tany Somalia i Omar, nanohy hatrany ny fanazarantena izy. Sady mazava no mampientanentana ireo sarin'i Kleist: Taminà takelaka iray, manavatsava ilay làlana feno olon'i Mogadishu i Omar, miala ireo henjam-pihetsika ara-pinoana avy amin'ny al-Shabab. Raha nihazakazaka teo amin'ny Kianja Coni voadaroka baomba izy, nahatsiaro tampoka an'i Beijing. Ankizy roa no mibahana ny fotoanany raha tokony ho ny fitaovana fanisàna fotoana (chronomètre).
Tsy toerana ho an'ny atleta Olaimpika i Mogadishu, ary nanapa-kevitra ny handao ny fiainany sy ny fianakaviany, mba hanatratra nofinofy iray i Omar. Nandeha tany Etiopia izy mba hitady ekipa. “Io no lasa zavatra tokana nokendreny teo amin'ny fiainana,” hoy i Krug nahatsiahy. “Mba hitady mpanazatra sy hahatongavana any amin'ny Lalao Olaimpika.”
Andinindininy, “An Olympic Dream.” Sary: nomen'i SelfMadeHero maimaimpoana
Nandray fanapahankevitra tsy dia fahita matetika i Kleist, ny hitantara betsaka momba ny bokiny tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra Facebook, izay mifototra amin'ireo tafatafa niaraka tamin'i Krug sy ny rahavavin'i Omar. “Te-hanomboka fanazarantena indray aho,” hoy ny lahatsoratra iray. “Mieritreritra foana an'i Beijing aho. Avy ao amin'izay nitoerako, afaka nahita ny afo Olaimpika aho. Sahala amin'ny hoe nahita ny tany tontolo iny.”
Fomba tsara iray entina hampientanentana amin'ny tantara ny hoe matetika nandalo sivan'ny media sosialy. Taorian'ny nanampian'i Krug an'i Omar hanokatra kaonty Facebook, nampiasain-dry zareo ilay sehatra mba hifandraisana tsy tapaka. Hafatra nosoratan'i Omar ho an'i Krug no fifandraisana farany teo amin'izy ireo, izay nanazavàny fa niala tao Etiopia izy hankany Libia, ary manantena ny hiampita ho any Italia.
Hita ho mampiahiahy toy ny mahazatra ny làlan'i Omar avy tany Etiopia nankany Libia. Nandoa vola taminà olona mpampiampita, izay nitondra azy tamin'ny làlana mampidi-doza, nanavatsava ny tany efitra, izy — làlana izay noraisin'ireo mpifindra monina an'arivorivony. Mafy sy manirery ny fanehoan'i Kleist ny tany efitra. Olona am-polony mihizina ao aminà fiara kely, izay mandeha mafy amin'ilay tany efitra tsy misy fiafaràny, mitarika rahom-bovoka lavabe any aoriany.
Natao hanampy ireo mpamaky mba hisaintsaina lalina ny olana iray izay nanomboka ho toy ny tsy an'olon-tokana irery ny zavatra toy izany. “Tsy voaisanay intsony aza izany,” hoy Kleist nanoratra tao amin'ny teny fampidirany. Matetika loatra, hoy izy, hadinontsika “fa maneho fiainan'olona ireo isa saro-pantarina.”
Ny taona 2012, nanoratra ho an'i Al Jazeera i Krug, mikasika ny fihetsehampony tamin'ny fahafatesan'i Omar. Tsapany ny “fandàvana ny tsy nahitàko azy indray, ny hatezerana hoe tsy nahavita nanao misimisy kokoa mba nanampiana azy aho, na hoe izao fotsiny ireo media — izay mpikambana ao anatin'ny sokajin'asako — vao miasa saina amin'ny fahalasanany.”
Kely ny finoan’ i Krug hoe nisy zavatra betsaka niova hatramin'izay. Ny taona 2015, Afrikàna mpifindra monina an'arivony no maty raha nanandrana niampita ny Mediterane. Siriana an-hetsiny no nitsoaka ny fireneny ary miatrika zava-doza mitovy amin'izany.
Mitohy mientanentana momba ireo fomba vaovao fanao fitantaràna tantara tena nisy toy ny “An Olympic Dream” i Krug.
“Angamba, tsy noeritreretiko mihitsy ny mety ho herin'ny boky tahaka an'io,” hoy izy. “Na amin'ny maha-mpanao gazety aza, reraka ihany ianao. Mila mitady fomba hafa hatrany isika entina hanehoana ireo tantara.”